Ashton Kutcher na Mila Kunis na-egwu ụmụaka na Beverly Hills Park
Ụnyaahụ na Beverly Hills paparazzi jisiri ike gụọ ndị na-eme ihe nkiri Ashton Kutcher na nwunye ya bụ Milo Kunis, mgbe ha kpọtara ụmụ ha na egwuregwu. Ndị na-ekiri ihe nkiri ahụ ji nnọọ ọrụ na egwuregwu Wyatt dị afọ atọ na Dimitri dị afọ na ọkara na ha leghaara igwefoto anya kpamkpam. Dị ka foto ndị ahụ na-egosi, njem a mere ka obi dị ụmụaka ụtọ, ọ bụghị nanị ụmụaka, kamakwa ndị na-eme ihe nkiri na-ele ụmụ ha anya.
Mila Kunis na Wyatt dị afọ atọ
Egwuregwu egwuregwu na uwe dị mfe
Ndị Fans ndị na-agbaso ndụ na ọrụ nke Kunis na Kutcher maara na na ndị na-eme ihe nkiri ndụ na-eji ejiji dị nnọọ mma na ọ dịghị mgbe ha na-anwa ile anya. Njem ụnyaahụ gosipụtara ya, n'ihi na n'egwuregwu ahụ, kpakpando pụtara n'ụdị kachasị mma. Na Mile ị ga-ahụ obere uwe ogologo oge na-acha ọsọ ọsọ na uwe elu na-acha ọcha ọcha nke nwere ntinye oji na aka aka. N'elu ụkwụ nke kpakpando ihe nkiri ahụ, a na-achọ ejiji ndị dị ọcha, ọ bụkwa naanị ejiji abụọ dị mkpa na-eyiri ihe ịchọ mma: otu dị n'aka nkịrị aka aka ekpe na nke ọzọ n'olu. Tụkwasị na nke a, ọ gaghị esiri gị ike ikwenye na ị gaghị eche echiche banyere ntutu isi na nhazi n'oge dị otú ahụ, n'ihi na Mila na-ahọrọ ịdị mma. Di ya, bụ Ashton, yiri nke a. Onye omekorita a ma ama na-eyi uwe eletriki na-acha anụnụ anụnụ, ndị sneakers checkered shirt na okpokoro baseball. Ụmụaka, nwa nwanyị ahụ gosipụtara uwe na-acha odo odo na ihe ọkụ ọkụ, ebe Dimitri dị obere yi uwe na-acha ọbara ọbara na uwe ojii na-acha anụnụ anụnụ.
Ashton na nwa ya bụ Demetrius
Mgbe foto ndị si na njem ahụ pụta na Ịntanetị, ọtụtụ ndị ọrụ dere nyocha ndị na-esonụ banyere atụmatụ a: "Nke a, n'ezie, bụ azụmahịa ha, ma ha adịghị ele anya nke ukwuu. Karịa Mila! O yiri ka ọ na-esi n'àkwà bilie ma gbaga n'ogige ntụrụndụ iji soro ụmụ ya na-egwuri egwu. "" Dị ka m maara, Kunis adịghị edozi uwe mgbe ọ na-abịa ndụ kwa ụbọchị. Otú ọ dị, uwe ogologo ọkpa a dị egwu. Mkpịsị ụkwụ a gbatịrị agbatị kwatara ihe niile, "" N'inwe ego dị ukwuu, onye omempụ ahụ dị egwu. Ka anyị kwuo na ọ chọghị iyi akwa ụkwụ na ejiji, ma ị nwere ike ịzụta uwe ọhụrụ maka ije ije. Gini mere onwe gi ji malite? ", Etc.
O siri ike ịmata: Mila Kunis gbanwere ọdịdị ya
Zoe Saldana nwetara otu kpakpando na Hollywood Walk of Fame
Mila Kunis n'ụzọ mara mma pụtara na ememme CinemaCon na Las Vegas
Kunis na-ekwu banyere otú o si azụ ụmụ ya
Mgbe foto ndị ahụ na Mila pụtara na Internet, ọtụtụ ndị na-aṅa ntị na nyocha ya, nke o nyere n'oge gara aga. Mkparịta ụka ahụ na onye na-agba ajụjụ ọnụ nke nwoke a ma ama a ma ama gbasara ụmụ ya na nke ahụ bụ ihe o kwuru banyere nke a:
"Mgbe anyị nwusịrị Dimitry, enwere m ike ikwu na ụmụ agbọghọ na ụmụ okoro na-etolite etolite n'ụzọ dị iche. Ndị na-anọchite anya mmekọahụ, ọbụna ma ọ bụrụ na ha dị ntakịrị, nwere ọgụgụ isi karịa ụmụ nwoke nke ọgbọ. Mgbe m na-atụ aro ka ụmụaka na-egwu egwu, Wyatt gbanwere n'otu oge, Dimitri na-esikwa n'èzí pụọ. Ọ dị ka nwa obere Neanderthal nke na-adịghị aghọta ihe ha chọrọ n'aka ya. Ikekwe, mgbe nwa m nwoke tolitere ma hụ usoro a, ọ ga-ajụ m ajụjụ banyere ihe m na-ekwu, ma enwere m ihe iji tụnyere ya, n'ihi na n'anya m abụọ n'ime ụmụaka ndị m hụrụ n'anya na-etolite. "
Michael Douglas na Catherine Zeta-Jones jiri obi ụtọ mee ememe ncheta nke ezinụlọ ha
Onye omekorita kachasị mma n'echiche ndị "Oscar" na 2016
Bella Hadid dara n'elu ala n'oge ngosi na New York
Coldplay frontman nwere ike iguzo ikpe
Singer Christina Aguilera chọrọ ịga n'okpuru okpueze a "tummy"
Tom Hardy jidere hijacker
Grammy 2016 - ndi nomine
Rita Ora weputara nchikota ndi mmadu azu azu maka Tezenis
Sarah Jessica Parker na Kim Cattrall: enyi ma ọ bụ ihu abụọ?
Onye na-eme ihe nkiri Charlie Sheen kwuru na ọ chọrọ iji aka ya hapụ ndụ ya mgbe ọ nụsịrị nchọpụta ya
Sam Claflin na Laura Haddock ghọrọ ndị nne na nna nke ugboro abụọ
Cate Blanchett gosiri nwa ya nke ọdụdụ
Street Ejiji - Winter 2017
Ụbọchị Chess Ụwa
Lentil na multivariate
Ọnọdụ ime mmụọ nke mmadụ
Kedu ka igwe ikuku si arụ ọrụ?
Nwa ọnwa anọ
Ejiri imeju ọkụkọ tinyere yabasị na ude mmiri
Kedu ihe nrọ banyere hedgehog banyere?
Beyonce kpakpando na bikini n'ehihie
Ihe ịrịba ama na July 7
Ụdị Venet na uwe
Onye na-eto eto na ntutu
Kwuo okwu n'udo n'ọmụmụ ihe
Ụjọ! "Joke" nke Prince Charles meriri obi nke nwa-nwoke Diana
Marshmallow si apụl - uzommeputa
Uwe mkpuchi maka mgbụsị akwụkwọ
Ịgba Ọtịa 2013